Dansa nezinkanyezi: ubani uPauline obabazekayo ohamba noSami El Gueddari noFauve Hautot? - ITELE RELAY
Accueil » ABANTU & LIFESTYLE Dansa nezinkanyezi: ubani uPauline obabazekayo ohamba noSami El Gueddari noFauve Hautot?
Dansa nezinkanyezi: ubani uPauline obabazekayo ohamba noSami El Gueddari noFauve Hautot?
Kusethi Danisa nezinkanyezi, NgoMgqibelo 16 Novemba 2019, Indaba kaPauline Déroulède yabangela izinyembezi kuye wonke umuntu. esifanayo Camille Combal, owazi lona wesifazane osemusha uqobo, wayengeke akwazi ukufihla imizwa yakhe ekugcineni kokusebenza kwakhe noSami El Gueddari futhi I-Fauve Hautot. "Ngiyazi konke odlule kukho. Ukukubona kukhona okuhle, ngokungagwegwesi. Siyakuhalalisela ngesibindi sakho, ukuhalalisela kubo bobathathu"Uthe, izwi lakhe liyathuthumela. Ngesizathu esihle, uPauline Déroulède angamandla emvelo. Ngonyaka owedlule, usuku nosuku, impilo yakhe yathuthumela lapho eshayiswa umshayeli, iminyaka engu-92, ngenkathi elinda isithuthuthu sakhe. Umphumela wale ngozi enkulu: ulahlekelwa umlenze wakhe wesobunxele.
Namuhla, ukuthukuthela kuhambile, ulwela ukuthi kulawulwe abashayeli asebekhulile. Ubuye njalo wacela amalungu kahulumeni ngalolu daba. Ukulwa isikhathi eside, kodwa uthi ngeke avume ukuhamba. "Lapho lezi zinyathelo zithathwa, singasho ukuthi ingozi yami naleyo yabanye isetshenziselwe okuthile", Utshele i-TF1 yezindaba emasontweni ambalwa edlule. Okwamanje, ukwazi usuku lokuqulwa kwecala lakhe, ugxile kuye futhi uzama ukuzakhela kabusha.
Inselelo yakhe elandelayo: Imidlalo ye-2024 Paralympic
"Angikaze ngilungiswe futhi angazi ukuthi ngiyoke ngibe khona yini"Uyasho futhi. Lo thisha owayenguthisha we-tennis usaqhubeka nokulwa. Usaqhubeka nokuqeqesha amahlandla amane ngesonto ngethembaukuthi uzokhethelwa imidlalo yeParis Paralympic Games 2024. Inselelo entsha esimfisela ukuthi aphumelele.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.closermag.fr/people/danse-avec-les-stars-qui-est-la-bouleversante-pauline-qui-a-accompagne-sami-el-1050087
U-Iris Mittenaere: kusihlwa wakhe wothando nesithandwa sakhe u-Diego el Glaoui